किम जोङ–अनले किन पोप फ्रान्सिसलाई भेट्न चाहे ?
फोर्ब्सः भारतका पाँच युवा अर्बपति
बीबीसी । फोर्ब्स इन्डिया म्यागजिनले यो वर्षका भारतीय अर्बपतिहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। लगातार ११ वर्षदेखि रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका प्रमुख मुकेश अम्बानी सो सूचीमा सबैभन्दा माथि छन्।
पत्रकार प्रशान्त झा 'मी टू' अभियानकाे शिकार, याैन दुर्व्यवहारकाे अाराेप लागेपछि राजीनामा
काठमाडौं । भारतीय पत्रिका ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’मा कार्यरत नेपाली पत्रकार प्रशान्त झा यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि पदमुक्त भएका छन् ।
कसरी एक दम्पतीले २० महिलाको हत्या गरे ?
मेक्सिको । मेक्सिकोमा बच्चालाई गुडाउने प्राममा मानव अङ्गसहित पक्राउ परेका दम्पतीले २० जना महिलाको हत्या गरेको स्वीकारेका छन्।
जब चीनले अमेरिकामाथि यस्तो आरोप लगायो
एजेन्सी । एसियाली शक्तिराष्ट्रको घरेलु तथा अन्तराष्ट्रिय नीतिलाई लिएर अमेरिकी पक्षबाट लगाइएको आरोपलाई लिएर एसिया भ्रमणको शिलशिलामा चीन पुगेका अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र उहाँका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच सोमबार तातो बहस भएको छ ।
इन्डोनेसियामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या करिब दुई हजार
जाकार्ता । इन्डोनेसियामा केही दिन अगाडी आएको शक्तिशाली भूकम्प र सुनामीका कारण मृत्यु हुनेहरुको सङ्ख्या करिब दुई हजार पुगेको छ।
दुर्घटनामा परी संसदीय निर्वाचनका उम्मेदवारको मृत्यु
काबुल । अफगानिस्तानको पश्चिमी बाड्घीस प्रान्तका एक जना उम्मेदवारको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको छ । उनको सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको स्थानीय निजी समाचार संस्थाले सोमबार जानकारी दिएको छ ।
गत महिना चीन भ्रमणमा रहँदा एकाएक बेपत्ता भएका भनिएका इन्टरपोलका अध्यक्ष मेङ होङवेईले राजीनामा दिएको चिनीया अधिकारीहरुले सोमबार घोषणा गरेका छन् । चिनीया कानुनको उल्लङ्घनको कथित आरोपमा मेङमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ ।